शिक्षक व्यवस्थापनमा चीनबाट हामीले धेरै सिक्नु छ | Aaja ko Shiksha
शिक्षक व्यवस्थापनमा चीनबाट हामीले धेरै सिक्नु छ
बाबुराम थापा, अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ
बाबुराम थापा, हक्की र स्पष्ट व्यक्तित्वका रुपमा चिनिनुुहुन्छ । नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष थापा ललितपुर खोकनास्थित रुद्रायणी माविका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ । यही २०१८ अक्टुबर ५–२५ मा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको सांघाईमा आयोजित २० दिने बृहत् शैक्षिक कार्यशालामा भाग लिएर हालै स्वदेश फर्किनुभएका थापाले त्यहाँ के कस्ता अनुभव र सिकाइ हासिल गर्नुभयो ? नेपालको तर्फबाट कसरी प्रस्तुत हुनुभयो भनेर आजको शिक्षाले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उहाँसित गरिएको शिक्षा–संवाद ।
चीनको २० दिने भ्रमण सकेर आउनुभएको छ, त्यहाँ जानुको मूल उद्देश्य के थियो ? अनि सिकाइ र अनुभव के–के रह्यो ?
सांघाई सिटी नेपालको छिमेकी मुलुक चीनको सबैभन्दा ठूलो शहर र संसारकै तेस्रो ठूलो शहरका रुपमा परिचित छ । त्यहाँ एउटा वर्कसप आयोजना गरिएको थियो । आयोजक थिए- रिसर्च इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल एण्ड कम्प्यारेटिभ–सांघाई र टिचर एजुकेसन सेन्टर युनेस्को चीन । यसको मुख्य उद्देश्यचाहिँ ‘पिसा’ र ‘टालिस’ परियोजना अनुसार शिक्षा विकास गर्नु हो । पिसाको अर्थ ‘प्रोजेक्ट फर इन्टरनेसनल स्ट्रेन्थ एसिसमेन्ट’ हो । सांघाईले सन् २००९ बाट यो पिसा प्रोजेक्ट शुरु गरेको रहेछ । शिक्षाका बारेमा विश्व कसरी अघि बढिरहेको छ ? यसका विकसित, अद्र्धविकसित र विकासोन्मुख देशहरु कुन ढङ्गले अघि बढिरहेको छन् भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने यो परियोजना रहेछ । अहिलेसम्म यसको निरन्तरता छ । पिसा प्रोजेक्टको मातहत्मा टि ए एल आइ एस अर्थात् ‘टालिस’ परियोजना पनि सँगसँगै रहेछ, यसलाई ‘टिचिङ एण्ड लर्निङ इन्टरनेसनल सर्वे’ भनिन्छ । शिक्षामा विश्व कसरी अघि बढिरहेको छ ? विश्वभरिका विद्यार्थी र शिक्षक कस्तो वातावरणमा अध्ययन गरिरहेका रहेछन् ? कुन ढङ्गले अध्ययन गर्दा रहेछन्, शैक्षणिक पद्धति कस्तो छ ? यी दुईटै सन्दर्भलाई मिलाएर २० दिने वर्कसप यही अक्टोबरमा आयोजना भएको थियो । यसमा विश्वका चारवटा महादेशका १५ देश सहभागी थिए । वर्कसपमा बङ्गलादेश, ब्राजिल, चेक रिपब्लिक, फिजी, जर्मनी, केन्या, मलेसिया, मेक्सिको, नेपाल, पाकिस्तान, पपु न्यू गिनिया, सिङ्गापुर, स्पेन, थाइल्याण्ड र भियतनामबाट सहभागी थियौं । अलि बढी संख्या एसियाको थियो । ती राष्ट्रको प्रकृति हेर्दा अत्यन्त विकसितदेखि विकासोन्मुख देशहरु सहभागी राष्ट्र थिए । यसमा सानो मुलुक फिजीसम्म थियो । चेकोस्लाभाकिया, चेक गणतन्त्र, स्पेन जस्ता शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता राख्ने अत्यन्त ‘एड्भान्स’ राष्ट्र पनि सहभागी बने । सहभागी प्रतिनिधिहरु शिक्षणमा सरोकार राख्ने संस्थाका व्यक्तित्वहरु हुनु हुनुहुन्थ्यो । विशेषगरी, ती देशका मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको पनि प्रतिनिधित्व थियो । नेपाल, बङ्गलादेश र ब्राजिलकाचाहिँ शिक्षक थिए । वर्कसपको विशेषगरी २० दिनमध्ये पाँच दिनचाहिँ चीनले शिक्षामा कसरी विकास गरिरहेको छ ? शिक्षाको इतिहास, शैक्षणिक पद्धति प्रारम्भ कहिलेबाट कसरी भयो भन्ने कुराको व्याख्या सहभागीहरुलाई गरियो भने चौथो दिनदेखि तीन दिनसम्म सांघाई कसरी संसारको तेस्रो विकसित शहर बन्न सक्यो भन्ने जानकारी गराइयो ।
सांघाईको शैक्षणिक पद्धति, शिक्षक व्यवस्थापन र पाठ्यक्रमको प्रबन्ध हेर्दा त अमेरिकाभन्दा पनि विकसित लाग्यो । हामीलाई त्यहाँको बसाई अवधिभर चारवटा स्कूलहरुमा भ्रमण गर्न लगियो । ती स्कूलहरु ‘पेपरलेस’ थिए । पाठ्यपुस्तक लिएर गइरहनु नपर्ने र सबै कम्प्यूटरबाटै पठनपाठन हुने । सांघाईका अधिकांश विद्यालय, महाविद्यालयहरुमा चाहिँ पेपरलेस शिक्षण रहेछ । कतिपय विद्यालयहरुमा चाहिँ पेपर स्टडीको व्यवस्था पनि थियो । मलाई पनि यस खालको व्यवस्था गरेर त्यही प्रकारको मोटिभेसन नेपालमा कहिले गर्न पाइएला भन्ने लाग्यो । शिक्षकहरुका बारेमा पनि वर्कसपमा पर्याप्त छलफल भयो । मुख्यगरी, पिसा र टालिसका बारेमा सांघाईले इन्फर्मेसन लिने र चीनमा त्यसमा पनि सांघाईमा कसरी शिक्षाको प्रबन्ध गरिएको रहेछ भनेर हामीलाई तथ्य–तथ्याङ्क दिइएको थियो ।
सांघाईमा विद्यालयहरु निःशुल्क छन् । त्यहाँ निजी विद्यालयहरु मैले पाएँ । प्राइभेट विद्यालयहरुचाहिँ अत्यन्त ‘वेल टुडु’ परिवारले चलाउने र वेल टुडु फेमिलीकै बालबालिका त्यहाँ जाने रहेछन् । मैले ‘तपाईँहरु किन प्राइभेट विद्यालय पठाउनु हुन्छ त ? जबकि सामुदायिक विद्यालयमै यति राम्रो पठनपाठन छ ?’ भनेर सोधेँ । यसमा मैले त्यहाँका अभिभावकहरुबाट दुई कारण पाएँ । एक त, निजी स्कूलहरुमा साना नानीहरुलाई अलि लामो समयसम्म हेरचाह गरिँदो रहेछ । पब्लिक स्कूलमा चाहिँ ९ देखि ४ बजेसम्मको समय मात्र छ । प्राइभेट स्कूलमा ‘इन्डिभिजुअल टेक केयर’ छ । र, त्यहाँ बढी समय सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा अलि बढी व्यवस्थित तरिकाले टेक केयर गरिने भएकाले हामी निजीमा बालबच्चा लैजान्छौं भनेर अभिभावकहरुले भने । मैले त ठानेको थिएँ–कम्युनिष्ट देश हो, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सबै राज्यले ब्यहोर्छ, प्राइभेट विद्यालय हुँदैन होला । तर, त्यस्तो होइन रहेछ ।
चीनमा निजी विद्यालयको निकै चाखलाग्दो जानकारी दिनु’भो, त्यहाँको निजी विद्यालय यहाँको जस्तो सरकारको समानान्तर ढङ्गले चलेका त छैनन् नि ?
बिल्कुल छैन । त्यहाँको पूरै नियमन गर्ने र शिक्षण व्यवस्थापनमा सरकारको हात हुने व्यवस्था छ । अर्थ उपार्जनभन्दा पनि सरकारले जुन ढङ्गले शिक्षामा लगानी गरेको छ, त्यसलाई सहयोग पुग्नेगरी निजी स्कूललाई उपयोग गरेको पाएँ । यहाँ जस्तो होइन । भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तानमा पनि निजी विद्यालय छन्, त्यहाँ जस्तो पनि होइन । चीनमा रहेका निजी विद्यालयचाहिँ नियमलाई आत्मसाथ गर्ने सेवामुखी र राज्यप्रति बढी उत्तरदायी देखिन्छन् ।
वर्कसप मुख्यगरी के–के विषयमा केन्द्रित थियो ?
वर्कसपमा विशेषगरी दुईटा कुरालाई फोकस गरिएको थियो । एउटाचाहिँ चीनको शैक्षिक इतिहासबारे जानकारी गराउने र वर्तमान अवस्थाबारे तथ्य दिने थियो । माओत्सेतुङका पालादेखि चीन कसरी अघि बढ्यो, त्यहाँको साँस्कृतिक क्रान्तिका बेला शिक्षण संस्थादेखि लिएर मुलुक कसरी धराशायी भयो ? त्यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुँदै सि जिनपिङसम्मका शैक्षिक नीतिहरुमा त्यहाँका पार्टीले गरेको योगदानका विषयमा ४–५ दिनसम्म हामीलाई सुनाइयो । शिक्षामा त्यहाँ पार्टीको उच्च चासो हुने, सरकार कसरी चलिरहेको छ, जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेको छ कि छैन ? भन्ने कुरामा पार्टीको प्रत्यक्ष निगरानी हुने गर्दछ । जन अपेक्षा अनुसार काम हुँदो रहेछ भन्ने मलाई महशूस भयो ।
शिक्षामा विद्यार्थीको सिकाइ नै मूल पक्ष हो । तपाईँहरुले घुमेका विद्यालयमा के पाउनुभयो ?
विद्यार्थीका लागि स्कूलमा मात्र नभई विद्यालयभन्दा बाहिर अफ आवरमा पनि के गराउनु पर्छ ? कसरी बिताइरहेको छ ? भनेर ध्यान दिइएको पाइयो । नेपालमा अभिभावकले १० बजे पठाइदिने अनि ४ बजेपछि स्कूलसँग वास्तै नगर्ने हाम्रो चलन छ । त्यहाँ त स्कूलले पनि चासो राख्छ । विद्यार्थीलाई स्कूल आवरबाहेकको समयमा ट्युटोरियल कक्षामा व्यस्त बनाउने चलन रहेछ । ९–१० बजेपछि तपाईँको नानी के गर्छ ? उसको रुचि के छ ? भनेर उसलाई ट्युटोरियल कक्षामा सहभागी गराइन्छ । ट्युटोरियल कक्षा पनि त्यहाँ प्रशस्त रहेछन् । ती ट्युटोरियल कक्षा यहाँ जस्तो चाहिँ होइन । त्यहाँ ट्युटोरियल कक्षा केवल बिहान र बेलुका चल्छन् । अभिभावकले आफ्ना नानीहरुलाई अतिरिक्त केही गराउन चाहन्छन् भने ट्युसन क्लासमा पठाउने गरिन्छ । ट्युसन क्लास पनि शिक्षकले चाहिँ चलाउन नपाउने नियम रहेछ । यदि शिक्षकले पढाएको पाएमा उसलाई तुरुन्तै बर्खास्त गरिन्छ । ट्युसन कक्षाका लागि त्यहाँ छुट्टै जनशक्ति हुने गर्छ । जो जागिरमा छैनन, तिनले मात्र ट्युसन पढाउन पाउँछन् । त्यसकारण ट्युसनको धेरै गुञ्जायस त्यहाँ रहेछ । त्यसैले पनि धेरै बालबालिका बिहान–बेलुका ट्युसनमै व्यस्त बन्ने गरेको त्यहाँ देखियो ।
अर्काे कुरा, त्यहाँको शिक्षा प्रणाली अति विद्यार्थीकेन्द्रित छ । गुणस्तरका निम्ति सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको भौतिक पूर्वाधार हो भनिँदो रहेछ । जब विद्यालय भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न हुँदैन, तबसम्म विद्यार्थीमा भएका क्षमतालाई बाहिर ल्याउन सकिँदैन । ‘क्लासरुम एक्टिभिटिज’भन्दा कक्षा बाहिर गरिने सहक्रियाकलाप महत्वपूर्ण हो, त्यसैले विद्यालयलाई भौतिक रुपमा चाहिँ सम्पन्न पार्नु पर्छ भन्ने मुख्य कुरा रहेछ । हामीले भ्रमण गरेका सबै विद्यालयमा फुटबल, बास्केट बल ग्राउण्ड भएको पायौं । कतिपयमा स्वीमिङ पुल पनि पायौं । ती भित्र जु पनि छ । म्युुजियम पनि छ । तर जु र म्युजियमसहितका विद्यालय चाहिँ न्यून संख्यामा रहेछन् । साधारण स्कूलमा पनि भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त देखिन्छ । सबै विद्यालयमा पुस्तकालय, कम्प्यूटर आदिको उचित प्रबन्ध गरिएको देखियो । को–करिकुल्ला एक्टिभिटिजलाई विशेष जोड दिइएको पाइयो ।
हुन त, गरीब त त्यहाँ पनि देखियो । सांघाईमा पनि मगन्तेहरु देखिए । तर हामीलाई चीनियाँहरुले भने कि ती गरिबीमा पर्नेहरु अल्छि भएर त्यो अवस्थामा पुगेका हुन् । ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षर छन् । ‘शतप्रतिशत साक्षरता दर पुर्याउने लाइनमा हामी छौं’ भनेर उनीहरुले प्रस्तुत गरेका थिए ।
शिक्षक व्यवस्थापन कसरी भइरहेको रहेछ ?
शिक्षकहरुको पनि उचित प्रबन्ध गरिएको छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने प्रणाली रहेछ । पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दा अधिकांश काम शिक्षकहरुलाई नै लगाउने प्रावधान छ । शिक्षकले रिसर्च गर्नैपर्ने, सकेसम्म पाठ्यपुस्तक लेख्नैपर्ने, जर्नलहरुमा लेख प्रकाशन गर्नैपर्ने र त्यहीँ आधारमा उसको बढुवा हुने नियम रहेको छ । शिक्षकका निम्ति चारवटा श्रेणी हुँदो रहेछ । एउटा श्रेणीबाट अर्काे श्रेणीमा जानका निम्ति शिक्षकहरुले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो मेहनतबाट शिक्षकको स्टाटस नै फरक हुँदो रहेछ । श्रेणीमा फरक । तलबमा फरक । सुविधामा फरक । त्यसैले, त्यहाँका शिक्षकहरु अतिरिक्त कडा परिश्रमी, सिर्जनात्मक र ‘रिसर्च ओरियन्टेड’मा काम गर्ने हुँदा रहेछन् । कुनै विद्यार्थी कमजोर भयो भने किन कमजोर भयो ? घरायसी वातावरण पो बिग्रिएको छ कि अथवा के छ ? आनीबानी बिग्रिनुमा साथी संगत हो कि ? कुलतमा लाग्या छ कि ? जस्ता विषयमा रिसर्च गर्नु पर्छ । रिसर्च भनेको एकेडेमिक रिसर्च मात्र होइन कि विद्यार्थीसँग सरोकार राख्ने विषयमा अध्ययन गरी समाधान पहिल्याउनु रहेछ । यी सबै कुरा पूरा गरेपछि मात्र शिक्षक अपग्रेड हुने अवस्था आउँछ । शिक्षकले विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, मुलुकको शैक्षिक प्रणालीको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ उनीहरुले विदेशमा कसरी शिक्षा अघि बढिरहेको छ भन्नेसम्मको चासो राख्नैपर्ने हुन्छ । चीनमा शिक्षकहरुको प्रबन्ध गर्ने र अपग्रेड गर्ने मापदण्ड निर्माण गरिएको छ, त्यसले उनीहरुलाई मेहनती बनाउन प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । शिक्षामा मुख्य पात्र भनेका शिक्षक नै हुन् भन्ने कुरा त्यहाँको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले बुझेको देखियो । राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रले तयार गरेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयनकर्ता भनेका शिक्षक नै हुन्, त्यसैले शिक्षकलाई अध्ययन–शोधमुखी बनाउनु पर्छ । उनीहरुलाई ‘मोटिभेसनल’ ढङ्गले तयार पार्नु पर्छ भन्नेमा स्पष्ट भएको देखियो । युनेस्कोले पनि के भन्छ भने शिक्षकका चारवटा कुरा हुनै पर्छ । शिक्षक तालिमयुक्त हुनुपर्यो । योग्य एवं क्षमतावान् हुनु पर्यो । ‘मोटिभेटेट’ र ‘सपोर्टिभ’ हुनुपर्यो। यी चार खालको योग्यता भएका शिक्षकबाट मात्र राज्यले तय गरेका शैक्षणिक पद्धति र नीतिलाई लागू गर्न सक्छ भन्ने त्यहाँको विश्वास छ । मैले शिक्षकलाई दिइने सुविधाका विषयमा पनि सोधेँ कि मिलिटरी, पुलिस, निजामती सेवामा र शिक्षकलाई दिइने तलब सुविधामा फरक छकि छैन भनेर । ‘सेनामा चाहिँ केही बढी छ तर कर्मचारी र शिक्षकबीच कुनै फरक छैन, हामीले समान तलब दिएका छौं’ भनेर चीनियाँ अधिकारीहरुले भने । अर्काे कुरा, त्यहाँ पनि स्थायी र अस्थायी शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था रहेछ । शिक्षकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दाराख्दै पनि राम्रो ड्युटी गर्न नसके सोझै ‘हायर एण्ड फायर’ गर्ने कानून छ । त्यसको कहीँ सुनुवाई हुँदैन । एक किसिमको कडा र ‘अटोक्रेटिक’ ढङ्गको राजनीतिक नेतृत्व पनि मैले त्यहाँ महशूस गरेँ ।
तपाईँले नेपालको स्थितिका विषयमा त्यहाँ के–के कुरा प्रस्तुत गर्नुभयो ?
मेरो प्रस्तुति अन्तिम दिनमा थियो । मैले ‘नेपालमा शिक्षक नियुक्ति पद्धति, प्रक्रिया र शैक्षिक विकास’का विषयमा प्रस्तुत गरेँ । नेपालमा शिक्षक छनौटमा भइरहेका पद्धति र प्रक्रिया तदर्थवादमा चलिरहेको तर अहिले क्रमशः यो दीगो प्रणालीतर्फ अघि बढिरहेको बताएँ । किनभने, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भई काम गरिरहेको अवस्था छ । यो आयोगले मुलुकको २५ वर्षे शिक्षा नीति तय गर्नेछ र आयोगमा नेपाल शिक्षक महासंघ र म आफूले पनि भर्खरैदेखि सहभागिता जनाउन थालेको छु भनेर जानकारी गराएँ । त्यसबाट हामी नेपाली शिक्षकहरुको नियुक्तिको पद्धतिका कुरा, सेवा–सुविधा र साथसाथै शैक्षणिक पद्धतिलाई प्रभावकारी पार्ने अनि यसलाई गुणस्तरीय बनाउने हो भने अहिलेको पाठ्यक्रमलाई नै परिवर्तन गर्नु पर्छ भनेँ । अहिले नेपालमा तीन खालका विद्यालय छन्, साधारण माध्यमिक, संस्कृत माध्यमिक र व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय भनेर मैले व्याख्या गरेँ । सँगसँगै मैले उहाँहरुलाई चीनमा पनि प्राविधिक विद्यालयहरु देखेँ तर ती थोरै छन्, तपाईँहरुको उच्च प्राथमिकता पनि साधारण विद्यालयमै रहेछ भनेँ । यहाँ चीनमा पनि साधारण विद्यालयलाई नै कसरी प्राविधिक र व्यावसायीकरण बनाउने भन्ने रहेछ र हामी पनि अहिले यही लाइनमा छौं, शिक्षक महासंघले पनि यही माग गरिरहेको छ भनेँ । नेपालमा भौतिक पूर्वाधार कमजोर छ, तीन वर्ष अघि भूकम्प गयो । भूईँचालोले भत्काएका विद्यालय बनाउन सकिएको छैन । औषत एक हजार चार सय मात्र प्रतिव्यक्ति आयस्रोत भएका नेपालीलाई शिक्षा विकासका निम्ति सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा राखेँ । संसारमै तीन/चारवटा कुरामा चीन अघि छ । त्यहाँ आठ मीनेटमा ४० किमि पार गर्ने त रेल नै छ । यस्तो विकसित चीनको छिमेकी मुलुक नेपाल पनि यतिबेला पाठ्यक्रम परिवर्तनको मुखमा छ । यी सबै प्रयत्नमा तपाईँहरुको टालिस र पिसाको कार्यक्रममा सहभागी बनाउनोस् भनेँ । वास्तवमा शिक्षामा एकाङ्की प्रयत्नले सोचेको परिणाम आउँदैन । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सरकार सबैको सामुहिक प्रयत्न हुनु जरुरी छ ।
तपाईँले योग्य र क्षमताका आधारमा चीनमा शिक्षक बन्न पाइने सुनाउनुभयो । नेपालमा शिक्षकहरु आन्दोलनका भरमा स्थायी गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्ने प्रवृत्ति देखिएकै हो । चीनको शिक्षकहरुको योग्यता र शर्त हेर्दा, नेपालमा के अहिलेसम्म गरिएका शिक्षक आन्दोलनको दिशा सही रहेछ त ?
शिक्षक आन्दोलनको दिशाचाहिँ ठीक ढङ्गले अघि बढिरहेको छ । किनभने, आन्दोलनको विषयवस्तु भनेको खाली शिक्षकको हक–हित र अधिकारको मात्र कुरा छैन । यसले पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्ने, संविधानले भनेको आधारभूत तहमा निःशुल्क र अनिवार्य अनि माध्यमिकमा निःशुल्क गर्ने भन्ने जुन प्रावधान छ, त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा लागू गर भन्ने कुरा छ । हाम्रो बहु साँस्कृतिक, बहुजातिय, बहुभाषिक मुलुकमा मूल प्रवाहमा पछि परेकालाई मूलप्रवाहीकरण गर भन्ने हाम्रो आन्दोलनको मागहरु हुन् । त्यसकारण आन्दोलन ठीक ढङ्गले अघि बढिरहेकै छ भन्ने हो । शिक्षाको एउटा मुख्य अभियानकर्ता नै सन्तुष्ट नभइकन उपलब्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन । शिक्षकहरुलाई सन्तुष्ट पार्ने काम राज्यले गर्नै पर्छ । तर, हामी शतप्रतिशत ठीक थियौं भन्ने होइन । हाम्रो आन्दोलन पनि परम्परागत र ‘कन्जरभेटिभ’ ढङ्गको चाहिँ भएकै हो र यो अझै पनि छ । अब त्यसलाई परिवर्तन गर्नेगरी अघि बढ्न जरुरी छ । खासमा पेशा र जिम्मेवारीलाई सँगसँगै आत्मसाथ गर्नु पर्छ । त्यसैले पनि नेपाल शिक्षक महासंघले ‘अधिकार र कर्तव्यका निम्ति शिक्षक एकता’ भनेको छ । यसरी परम्परागत आन्दोलन नभइरहनुको मूल कारक राज्य नै हो । शुरुमै ठीक ढङ्गले शिक्षक छनौटका गरेको भए योग्यतम् शिक्षक भर्ना हुन्थे र त्यही अनुसार प्रबन्ध पनि हुन सक्थ्यो । त्यसैले अब शिक्षकहरुको समस्या किनारा लाग्दै गएकाले हाम्रो यो नेपाली शिक्षकहरुको पंक्ति राज्यले अवलम्बन गरेको समृद्धिको दिशामा आफूलाई समाहित गर्दै जानु पर्छ । यसका निम्ति राज्यका तीनवटै स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय निकायले यो पंक्तिको क्षमता, योग्यता, अनुभवलाई यथोचित ढङ्गले परिचालित गर्नपट्टि लाग्नु पर्छ ।
तपाईँहरु ‘ट्रेड युनियनिजम’लाई निकै महत्व दिनुहुन्छ, चीनमा शिक्षकको ट्रेड युनियन छ कि छैन ?
छ तर त्यहाँ ट्रेड युनियन ‘हाइ साइज’मा छैन । शिक्षक युनियन त छ तर ट्रेड युनियनका रुपमा भन्दा पनि सामाजिक र प्रोफेसनल युनियनिजमका रुपमा छन् । त्यसले यहाँको जस्तो आन्दोलन गर्दैन र गर्नुपनि पर्दैन । मैले उहाँहरुलाई जिज्ञासा राखेको थिएँ–तपाईँले मलाई त महासंघको हैसियतले बोलाउनुभयो । म त विश्व शिक्षक महासंघ एसिया प्यासिफिकको बोर्ड मेम्बर पनि हुँ भनेँ । चीनमा शिक्षक युनियनको भूमिका के छ भनेँ । उहाँहरुले भन्नुभयो–हामीकहाँ पनि युनियन छ । स्कूल–स्कूलमै छ तर ट्रेड युनियनका रुपमा छैनन् ।
त्यो दिन यहाँ कहिले आउँला त ?
त्यो दिन ल्याउनका निम्ति नेपालका राजनीतिक नेतृत्व र सरकार सचेतका साथ अघि बढ्नु पर्छ । हामीले आफ्नो व्यवसायलाई मजबूत पार्ने कुरामा चेत सबैमा नआई हुँदैन ।
चीनको २० दिने कार्यशालामा भाग लिएपछिको उपलब्धि कसरी लिनुभएको छ ?
सारमा मलाई चीनको २० दिने बसाई अवधिमा शैक्षणिक पद्धतिसम्बन्धी सांघाईले जुन बुझ्ने मौका दियो, १४ वटा राष्ट्रमध्ये अति विकसितदेखि एसिया प्यासिफिक राष्ट्र फिजीसम्मले आ–आफ्ना स्थिति दर्शाए । नेपालभन्दा सानो मुलुक फिजीले पनि धेरै कुरामा प्रगति गरेको रहेछ । त्यहाँबाट शिक्षा विभागका निर्देशकले गर्नुभएको प्रस्तुतिले म झन् प्रभावित भएँ । यसबाट पनि के देखिन्छ भने हाम्रो सिङ्गो सरकारले शिक्षामा उच्च प्राथमिकता दिनु पर्छ भन्नेमा चेत हुनै पर्छ । चीन कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवले भन्नुभएको थियो कि हाम्रो बढी हेराइ नै शिक्षाबाट हुन्छ । उहाँले एक–दुई दिन पछि हामी पुलको उद्घाटन गर्दैछौं भन्नुभएको थियो । हुन पनि, त्यहाँ भर्खरै ५५ किमिको पुल उद्घाटन भयो । समुद्रमुनि हुँदै पहाड छेड्दै त्यो पुल बनेको छ । सबैभन्दा दु्रुतगतिको रेल चीनमै छ । यी सबै कुरा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकै कारण त्यहाँ सम्भव भएको हो । मलाई चीनियाँ प्रतिनिधिहरुले भनेका छन्–तपाईँले पनि नेपाल सरकारलाई भन्नोस् कि प्रत्येक साल टालिस र पिसामा नेपालबाट प्रतिनिधि गराउन हामी तयार छौं । सम्भवतः सांघाईले नेपालको प्रतिनिधित्व गराउन मसँग कन्सल्टेन्सन गर्छ होला र म पनि यो कुरा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गर्ने नै छु ।